Faallo: Heshiiskii Buuhoodle- Dr. Abdelkareem waa Halyeey Khaatumo, W/Q M Ali Daad. | | Horufadhi Online
Tuesday, November 1st, 2016 | Posted by News Hour
Faallo: Heshiiskii Buuhoodle- Dr. Abdelkareem waa Halyeey Khaatumo, W/Q M Ali Daad.
Dr. Cabdikariim Xasan Jaamac waa halyeey Khaatumo oo taariikhda Khaatumo baal dahab ah kaga qormay. Waa nasiib wanaag inuu Dr. Cabdikriim yimaado Buuhodle isagoo wafdi hoggaaminaya waqti reer Khaatumo aad ugu baahnaayeen cid wax la farsamaysa oo la furdaamisa khilaafaadka iyo muwaafaqo darrada
ragaadisay shacabka reer Khaatumo iyo maamulkooda.
Wafdiga khayr wade shir taariikhi ah ayuu reer Khaatumo ugu qabtay magaalada Buuhoodle ee horyaalka u ah halganka shacabka Khaatumo ugu jiro siduu ku heli lahaa is-xorayn, madaxbannaani iyo isutalis. Wuxuu ahaa shir taariikhi ah oo aan la hilmaami karin. Shirku wuxuu ku dhammaaday guul, waxaana laga soo saaray go’aanu lagu xalliyey khilaafaadkii iyo is-fahan waagii ka dhex jiray madaxda sare ee maamulka Khaatumo iyo weliba xiniftii kululayd ee u dhexaysay madaxda dhaqameedka iyo maamulka. Alle haka abaal mariyo doktar Cabdikariim iyo xubnaha wafdigiisa ka tirsanaa shaqada fiican ay shacabka Khaatumo State u qabteen. Hadda shacabka Khaatumo wuxuu dareemayaa nafis sidii culays saarnaa ka degay. Maamulka iyo shacabkuba waxay si kal iyo laab ah Allaha Kariimka ah uga mahad naqeen heshiiska la gaadhay.
Shacabku wuxuu ku jiraa ray-rayn, farxad, dabaaldeg iyo damaashaad.
Haddaba reer Khaatumo mar kale dib ha isu habeeyeen oo ha isu nidaamiyeen. Hala iska jiro inuu shuushkii markale soo noqdo; hala hirgeliyo go’aandii shirka kasoo baxay, shirka Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe ku dhawaaqay hala taageero; Madaxda halagu guubaabiyo si wasiir Axmed Moxamuud Doolaal iyo abaanduule Faysal Xasan Falaalug loogu soo celiyo labadii jago ee laga qaaday. Hala iska dhaafo oo halaga waantoodbo in madaxda qaranka Khaatumo oo la iska caayayo sabab la’aan iyo in beel la iska necbaado oo la saarnaado had iyo jeer. Halla iska jiro sharka iyo dhibaatada dadka calooshooda u shaqaysta ee u dhaqma sidii shiribkii Abgaalka ee ahaa “Aniga ninkii rabaa hay rartee, anigu raashin baan rabaa.”
Dhammaan shacabkow Khaatumo way dhaqaaqdee, qof kastow dhankaaga yay ka dheliyi
Qore: Moxamed Cali Daad
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=26633
Posted by News Hour on Nov 1 2016. Filed under fikradaha, wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
4 Comments for “Faallo: Heshiiskii Buuhoodle- Dr. Abdelkareem waa Halyeey Khaatumo, W/Q M Ali Daad.”
November 1, 2016 - 9:32 pm
Daadow cabdikariim mahadsan adna waad mahadsan tahay laakiin faallo hore ayaan ku sheegay dibi axan laga dhig ahaa daba go’an oo lo’dii jiif iyo joogba u diiday illaa laga saarayna ay xasili weyday. Waxaa la mid ah tan ina Khaliif Galaydh oo haddaan Khaatumo laga masaafurin aanay suurto gal ahayn heshiiskan aan ku wada naaloonaynaa inuu midha dhal noqdo waayo dabagoos baa raarta ugu jira. Bal eeg, wuxuu yidhi ninkii bal ridaasi intaan iibinayo is nuugida ha iska dayso. Waa kaas durba heshiiskii jabiyey waayo garaadku wuxuu yidhi inta aynu ka shirayno cidna yaanay meel aadin, waa kaas Cali Siilaanyo u dhuuntay iyadoo aanay raadkii shirkuba baa bi in. Dabagoos illaa aynu iska xorayno wallee talada khaatumo meel dheer bay ku laalan tahay.
November 1, 2016 - 10:09 pm
Wadahadalada khaatumo Iyo Somaliland oo ka dhacaya Addis Ababa.
Cali khaliif galaydh oo nadaxweyne siilaanyo uga kireeyay hotel kii lagaga saxeexan lahaa in khaatumo si rasmi ah ugu biirtay Somaliland oo Cali ka noqday fikirkii sii hore.
November 2, 2016 - 12:02 am
Dhoodi inaad reer oodeed tahay Oo aadan siyaasad aqoon ayaad sheegtay dawlad ayaa u yeedhay Galaydh siilaanyo sida loogu yeedho Oo kale ma odey ayaa siyaasada looga fasax qaadan??
November 2, 2016 - 9:18 am
Warsame marka xaaladdu caadi tahay maamulku cidna fasax ugama baahna laakiin mar haddii la is qabto wixii la isku qabtay illaa laga heshiiyo doca docayntu ma fiicna. Anigu waxaan ka digayaa kala fogaynta Cali ee uu dadka kula dhex jiro iyo inuu yididiilada dadka ku ciyaarayo waayo markii horeba halkaas kala geeyay dadka. Reer oodeed iyada waxba ka odhan maayo oo aniga magacaygu waa DHOODI MEER iyo darwiish aan tolkiis kala gurin laakiin ku jira halgan culus.